किन सहस्राब्दीहरू नगद भन्दा बढी डिजिटल भुक्तानी विधिहरू छनौट गर्दछन् - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
पेन्सेलबाट क्यान्भा स्टुडियो द्वारा फोटो।
सम्पादकको पिक अप्रिल 24, 2021 अप्रिल 21, 2021 मारी Nives B2B, ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
सहस्राब्दी वास्तवमा व्यक्तिमा सबै भन्दा बढी शपिंग गर्न को लागी गर्छ।
उमेर वा लि of्गको पर्वा बिना, सबै सहस्राब्दीलाई प्रभाव पार्ने कुराको मूल्य हो।
Gig अर्थव्यवस्था मा वृद्धि को कारण, ती मध्ये धेरै डिजिटल माध्यम मार्फत भुक्तान गरिन्छ र बस यो नगद मा रूपान्तरण भएको को परेशानी चाहँदैन।
यो प्रवृत्ति जाँच्नुहोस् र जाँचौं कि किन हजारौंले नगदी भन्दा डिजिटल भुक्तानी छनौट गर्छन्।
पहिलो डिजिटल नेटिभहरू
सहस्राब्दीहरू युवा वयस्कहरू र १ 1980 .० र १ 1996 2025 between बीचमा जन्मेका वयस्कहरू हुन्। २०२XNUMX सम्ममा तिनीहरू समावेश हुनुपर्छ तीन चौथाई विश्वव्यापी कार्यबल। विशाल उपभोक्ता सम्भाव्यता र विश्वव्यापी खर्च शक्तिको साथ एक पुस्ताको रूपमा, उपभोक्ता र भुक्तानी विकल्पहरू प्रदान गर्ने कुरामा उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
तथ्य यो छ कि उनीहरू पहिलो "डिजिटल नेटिभ" पुस्ता हुन्, माथिको बजार प्रभावको साथ मिलेर, तिनीहरू दुबै डिजिटल भुक्तानी विधिहरू प्रयोग गरेर सहजै छन् भन्ने कुरा निश्चित गर्दछन् र त्यो प्रवृत्तिलाई सक्षम पार्न बजारको कुनै विकल्प छैन। यसले एक प्रतिक्रिया लुप बनाउँछ जुन केवल यी विधिहरूको उपलब्धता र उपयोग बढाउँछ।
पेन्सेल्सबाट एनेट लुसिना द्वारा फोटो।
तिनीहरूले कसरी शपिंग गर्छन्?
सहस्राब्दी वास्तवमा व्यक्तिमा सबै भन्दा बढी शपिंग गर्न को लागी गर्छ। आधा भन्दा बढि हजारौंले आफ्नो शपिंग अफलाइन गर्छन्, जबकि संयुक्त कम्प्युटर वा फोनहरूमा संयुक्त percent percent प्रतिशत शप। अप्रत्याशित रूपमा, पुराना मिलेनियलहरू ती हुन् जसले फोनमा किनमेल गर्न रुचाउँछन्।
उमेर वा लि of्गको पर्वा बिना, सबै सहस्राब्दीलाई प्रभाव पार्ने कुराको मूल्य हो। र यो तपाईंको घरको वा तपाईंको स्मार्टफोनको आरामबाट सम्झौताहरूको खोजी गर्न धेरै नै सजिलो छ। यसले ढिलाइ भएको भुक्तानीको लोकप्रियता वर्णन गर्दछ अष्ट्रेलियाली सहस्राब्दी र जनरल जेड-ईरस बीच। एक राम्रो सम्झौता Snapping यसको लायक छ, यदि तपाईंसँग अहिले हातमा पैसा छैन भने पनि।
यो आश्चर्यजनक कुरा हो, कि सहस्राब्दीको अघिल्लो पुस्ताको भन्दा गरीब आर्थिक दृष्टिकोण छ, त्यसैले हरेक पैसा गणना बचत।
अर्को कारक भनेको प्रयोगको सहजता हो। डिजिटल भुक्तानहरू उनीहरूको नगदी विकल्पहरूको तुलनामा बढी सुविधाजनक हुन्छन्। थप रूपमा, बैंकहरूसँग झगडा गर्न आवश्यक पर्दैन, लाइनहरूमा पर्खदै, र समान ब्यूरोक्रेटिक व्यस्तता जसले युवा पुस्तालाई टाढा गर्दछ। कागजको अभाव अर्को बारमा उल्लिखित उल्टो हो, किनभने प्राय: सहस्राब्दीहरूले बरु अनलाइन फारम भर्न सक्दछन् (जुन उनीहरूले सायद उनीहरूको ब्राउजरमा बचत गरेका छन्) फारमहरूको गुच्छा भर्ने भन्दा।
नगद, उपयोगी छ, डोडो को बाटो मा रहेको देखिन्छ। हामीले अगाडि उल्लेख गरिसक्यौं, हजारौं वर्ष र जेनर-जेर जुन अहिले नगदका लागि टाँसिएका छन् तर पछि मिति प्रयोगमा भुक्तानीको अपेक्षा गर्छन् हम्म खरीद गर्नुहोस् अब अष्ट्रेलियामा पछि भुक्तान गर्नुहोस् वा यस्तै प्रकारका सेवाहरू उनीहरूमा भरपर्दो गर्न। डिजिटल भुक्तानी को शब्दावली सुविधा हो, र तपाईंको कार्ड वा तपाईंको फोन स्वाइप गर्न परिवर्तन परिवर्तन गणना भन्दा सजिलो हुने छ।
पेक्सल्सबाट टिम डगलस द्वारा फोटो।
तिनीहरूलाई प्राय: डिजिटल भुक्तानी गरिन्छ
यो एक महत्त्वपूर्ण तर प्रायः बेवास्ता गरिएको पक्ष हो किन युवा समूहले डिजिटल भुक्तानी विधिहरू प्राथमिकता दिन्छन्। Gig अर्थव्यवस्था मा वृद्धि को कारण, ती मध्ये धेरै डिजिटल माध्यम मार्फत भुक्तान गरिन्छ र बस यो नगद मा रूपान्तरण भएको को परेशानी चाहँदैन।
मानिसहरु जो कि gig अर्थव्यवस्था को हिस्सा छैन प्रायः स्वतन्त्र काम गर्छन् र पत्ता लगाएका छन् कि यो नगद भुक्तानहरुमा डिजिटल स्रोतहरु मा निर्भर गर्न को लागी सुविधाजनक छ।
हो, हो। यो धेरै धेरै त्यहाँ भएको थियो। कार्ड प्रयोग र घरबाट अर्डरिंग सबै पुस्ताका लागि पहिलेभन्दा बढी सामान्य भएको छ, हजारौं वर्ष मात्र होइन, तर सहस्राब्दीहरू "नयाँ सामान्य" लाई अनुकूल बनाउनको लागि सब भन्दा छिटो थिए।
नगद पैसा जोगाउनु मात्र सहज भएको छैन तर स्वास्थ्यको संरक्षण र महामारीको समयमा अरूको सुरक्षा गर्ने एउटा तरिका पनि छ। कोरोनाभाइरस महामारीले डिजिटल भुक्तानीको अंगिकारको गति बढाएको छ र सहस्राब्दी यसको लागि तयार थिए। भ्याक्सिन रोलआउटको साथ पनि, डिजिटल खरीदहरूको व्यापकता यसको पूर्व महामारीको स्तरमा जान सम्भव छैन, र व्यापार तदनुसार परिवर्तन हुँदैछन्.
यस प्रश्नको उत्तर एकदम सरल देखिन्छ। सहस्राब्दीहरू डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग गरेर उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि सरल रूपमा प्रयोग गरिन्छ, र यो डिजिटलको लागि भुक्तान गर्न धेरै सुविधाजनक छ। राम्रो सम्झौता पनी तिनीहरूको इच्छा पनि तिनीहरूलाई पैसा बचत गर्न को लागी सेवाहरु कि "अब तिर्नुहोस् पछि तिर्न" प्रयोग गर्न ड्राइभ।
त्यसोभए, उत्तर यो हो कि तिनीहरू यसको लागि प्रयोग गर्दै छन्, यो सुविधाजनक छ, र तिनीहरू मितव्ययी हुन्छन्।
सांप्रदायिक समाचार डिजिटल भुक्तानी विधि डिजिटल भुक्तानी millennials नयाँ सामान्य अनलाइन किनमेल
Wannabe विश्व यात्री। ब्लगर बहिनी, छोरी, साथी र बुआ
फोर्कलिफ्टको लागि मागले बलियो ब्याट्रीहरूको लागि आवश्यकता बढाउँछ